6 Hababka loo diro loona helo fariimaha qoraalka ee Computer
Ku xayiran yihiin oo ka yaabban wixii aad samayn, maxaa yeelay, aad ayaa laga badiyay aad telefoon ama aad ka gaari karin adeeg gacanta aad; ama laga yaabee in aad xadka SMS bil kasta waxaa yaraaday? Kuwani waa noocyada xaaladaha marka aad computer uu noqonayaa mid ka mid ah hantidooda ugu waxtar leh in aad leedahay. Waxaad u baahan tahay in ay ku riday welwelka aad ka gees u. Waxaad fariin qoraal ah ka computer soo diri kartaa oo aad hesho farriimo qoraal kombiyuutarka. Weli waxaad kula xiriiri kartaa saaxiibadaa iyo inta aad leedahay PC ah. Waxaa jira dhowr ah adeegyada online u sahli doona in aad u soo dirto fariin qoraal ah oo ka hooseeya waxaa lagu lix siyaabo aad isticmaali karto si labada qoraal ka computer diro loona helo fariimaha qoraalka ah ee computer.
# 1: Isticmaalka email-ka-SMS Albaabo
Waxaa suurto gal ah in ay soo dirto oo aad hesho farriimo qoraal ah ka kombiyuutar gaarka ah si ay telefoonka gacanta iyada oo ay ku cararaan SMS ah. Waxaad sameyn kartaa tani adigoo isticmaalaya email. Qoraallada waa in loo diraa in ASCII Qoraal keliya hab. Messages kuwa loo soo diray iyadoo la isticmaalayo hab aan ASCII ama waa in hab HTML muuqan doonaan characters sida funny qaataha. Ka hor inta diraya fariin kasta, waxaa muhiim ah in aad ogtahay lambarka taleefanka qaataha iyo domain ah ee bixiyaha adeegga ay. Tani waxa ay suurtogelin doontaa in aad si fudud u heli cinwaanka saxda ah albaab in ay u gudbinayaan aad fariin.
Si aad u soo diro farriin, kaliya raac tallaabooyinkan fudud;
Go u menu sare midig, guji Email iyo xiriirada la xusho. Tani waxay aad u keeneysaa in ay ku darto xiriir ah.
dar xiriir ee qaataha ah ee aad fariin galay xiriir email aad. Tani waxay u baahan tahay in aad mar hore badbaadiyey xiriir ee xiriirada emailkaaga. Tallaabada 3 ka koobanahay aad fariin. Tallaabada ugu horreysa waa in ay ka koobanahay aad fariin in aad email kaliya oo aad jeceshahay sida caadiga ah ee qoraal iyo email. Tallaabada 4 Marka aad haysato fariin diyaar, si fudud u geli lambarka 10-god qaataha iyo guji diro. Tusaale ahaan, haddii aad doonayso inaad u soo dirto fariin u lambarka telefoonka ah adeegi by AT & T iyo xiriir waa +1 987-654-4321, markaas SMS ah waxaa loo diri doonaa 9876544321@txt.att.net .
Waxa kale oo aad fariin (s) diri kartaa in telefoonka wax gacanta iyagoo isticmaalaya Skype Desktop App. Waxaa suurto gal ah in ay u diraan farriimaha qoraalka ah si tirada text-karti ama Skype xiriir ah oo ka mid ah tirada text-karti, kuwaas oo badbaadiyey ee profile. Si aad u soo dirto fariin SMS text ka, kaliya aad u baahan tahay in dhowr Credit Skype oo aad ku fiican tahay inuu tago. Just raac tallaabooyinkan fudud: Tallaabo 1 Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad ku saxiixo si Skype ka desktop. Tallaabada 2 gala xiriir ama tirada. Haddii tirada weli ma badbaadiyey in liiska xiriirada aad, ee toolbar Skype ah, riix icon telefoonada yeedha. Pad dial A lagu soo bandhigi doonaa dhinaca midigta ah ee shaashadda.
Markaas wac lambarka.
Si fariin u diri, xaq guji xiriir ah oo ay doortaan diri SMS fariin amarka ama guji via Skype amarka sanduuqa wadahadalka iyo SMS xusho.
In talaabadan aad soo gashid fariin ku riday sanduuqa diinta iyo riix badhanka Send ah. Your fariin la soo diri doono inay phone qaataha ah ee.
Sidee si ay u helaan fariin isticmaalaya Skype aad kombuutarka
Si aad u hesho fariin kasta oo laguu soo diray via Skype aad fariin, kaliya gasho si aad desktop app Skype, ka dibna la furo fariinta.
Wondershare MirrorGo sidoo kale ku siinayaa iyo waddo u oggolaan doontaa in aad soo dirto oo aad hesho qoraalka SMS on your computer shakhsi. Halkan waxa ku jira talaabooyin fudud in aad u baahan tahay in la raaco. Tallaabada 1 Waxa ugu horeeyo ee la sameeyo waa in lagu xiro aad casriga la your computer. Tani waxay kuu ogolaaneysaa in aad isticmaasho functionalities lagama maarmaan ah MirrorGo. Waxaad sidoo kale ku xidhi karaa iyadoo la isticmaalayo xiriir USB ah ama iyada oo Wi-Fi. Tallaabada 2 Marka la xidhiidha ay tahay guul, waxaad ka heli doontaa interface ah oo kuu ogolaanaysaa inaad soo dirto oo aad hesho farriimo aad kombuutarka. Halkan waxa aad isticmaali kartaa keyboard PC ay u qor iyo dirista farriimaha
Waxaad kaloo isticmaali kartaa Google Voice loo diro loona helo fariimaha. Si ka your computer shakhsi diri qoraalka, waxaad u baahan tahay in la raaco tallaabooyinka fudud ee hoose ku siiyey.
Waxaad marka hore u baahan tahay si ay u abuuraan xisaab Google Voice ah. In la abuuro xisaabta, guji http://google.com/voice
On your computer, furo Google Voice
Riix badhanka Text in la helo bidixda op bogga ah
Ku qor lambarka taleefanka qaataha soo galo "Si" field.
Talaabadani waxay, aad fariin duurka Quraanka qori oo guji diro.
Si aad u hesho qoraal ah kuu soo diraan via cod Google, raac tallaabooyinka hoose,
On your computer, u furan cod Google ka dibna riix on Settings dusheeda midig ee bogga furan.
Saldhigyada, guji farriinta codka & Text tab ah si aad u furto, ka dibna riix qaybta Text gudbinta
Riix Messages soo gudbiyo My Email iyo riix tab badbaadin isbedel.
# 5: Adeegsiga iMessages
iMessage ma ahan oo kaliya app telefoonka. Waxaad kaloo isticmaali kartaa app this ee your computer loo diro loona helo fariimaha. Si aad u soo dir fariin isticmaalaya iMessages, halkan waa waxa aad u baahan tahay inaad samayso.
Fur app iMessages ku saabsan desktop
Ku qor lambarka telefoonka aad qaataha at tab Si aad ah.
Nooca aad fariin ka dibna riix badhanka la diro si ay u soo diro farriin ah.
# 6: Text dhex website bixiyaha adeegga wireless ee
Maanta web waxa ka buuxa bixiyeyaasha adeegga wireless. Waxaad dooran kartaa in aad soo dirto oo aad hesho farriimo aad dhex tahay website bixiyaha adeegga wireless ee. Tani websites aan xad lahayn SMS ku siinayaa fursad loo diro loona helo qoraalka gudaha iyo dibada. Talaabooyinka on diraya SMS via fariin qoraal wireless bixiyaha Tallaabo 1: Ku gal, ama diiwaan xisaabtaada websites Most adeega SMS waxaad u baahan doontaa inaad iska diiwaangeliso xisaabta la iyaga si ay u helaan adeegyada ay. Waayo, kanu, waxaa laga yaabaa in aad leedahay si aad aqbasho cinwaanka email ama lambarka taleefanka mobile. Tallaabada 2aad: Ku qor tirada aad u baahan tahay inaad soo dirto fariin ah in.
Inta badan website-yada kuwaas oo ku idin waydiin tirada mobile phone ee qaataha iyo kordhinta tirada phone this. Oo iyaga qaarkood kalena u adeegi sidayaal gaar ah oo keliya - marka hubi inaad iyaga kantarool.
Tallaabo 3: Ku qor fariin ah oo u soo dir
Halkaa marka ay marayso, si fudud nooca SMS ah oo riix "diri" button.
Gift Guuradii Wedding - Dooro Wedding ee Best Guuradii Gift
> Resource > Talooyin > 6 Hababka loo diro loona helo fariimaha qoraalka ee Computer